1. အရသာရှိသောအချိုပွဲများလည်းပြုလုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီး၎င်းတို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိထိပ်တန်းမီနူးများဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက seductive အမွှေးအကြိုင်ရှိတယ် နူးညံ့ချောမွေ့သောအရသာ ဘေးထွက်ဟင်းပွဲအမျိုးမျိုးနှင့်ကိုက်ညီသည် သင်၏အရသာသို့မဟုတ်အိမ်တွင်သင့်အိမ်ရှိအရာအားလုံးနှင့်အညီလှပစွာအလှဆင်ပါ။ ကလေးများလုပ်နိုင်သောမီနူးတစ်ခုဖြစ်သည် ရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်မှုများဖြင့်အားလပ်ရက်များသို့မဟုတ်သီတင်းပတ်များအတွင်းပျော်စရာနှင့်အရသာကိုထည့်ပါ။ သို့သော်အထူးခံစားရသည် နှင့် pancakes အောင်ဘယ်လို ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောမီနူးဖြစ်သော်လည်း ဒါပေမယ့်သေချာပေါက်ထိမိသောတိုင်းရှုထောအတွက်မှတ်ဥာဏ်ပေးပါ
2. လူကြိုက်များသော menu pancake ကိုသိရန်ပန်ကိတ် (ပန်ကိတ်) ကိုကိတ်မုန့်သို့မဟုတ်ပြားချပ်သောပေါင်မုန့်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ နို့၊ ထောပတ်၊ ကြက်ဥ၊ သကြားသို့မဟုတ်လှည့်စားလိုသူနှင့်ရောစပ်သောမုန့်ညက်မှပြုလုပ်သောကုန်ကြမ်းများကိုအသုံးပြုခြင်း ချက်ပြုတ်သည်အထိဆီသို့မဟုတ်ထောပတ်နှင့်အတူကြော်ရန်ဂျုံမှုန့်ကိုဆောင်ခဲ့သဖြင့် ထို့ကြောင့်ပန်ဟူသောစကားလုံးကိုပူးတွဲထားသည် အချိုပွဲနာမည်၏မူလအစသည် pancakes ပူပြင်းစွာစားခဲ့သည် မနက်စာအဖြစ် ဒါမှမဟုတ်ရည်နှင့်အတူအလှဆင်ဖို့ ပျားရည်နှင့်သစ်သီး အဖြစ်ချောကလက်အဖြစ် ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်မိသားစုနှစ်သက်သောပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
3. pancakes ပြုလုပ်ရန်အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုမီးဖိုချောင်တိုင်းနီးပါးတွင် ၀ ယ်ယူရန်ခဲယဉ်းသည်။ ထပ်မံ၍ ၀ ယ်ယူရန်ခဲယဉ်းသည်။ •ဂျုံမှုန့်•သကြား•ဆား•မုန့်ဖုတ်အမှုန့်•ဥ• vanilla အရသာ•ထောပတ်
4. pancakes အောင်ဘယ်လို ပျော်စရာကောင်းသောအရသာရှိသောအစားအစာမီနူး•ဂျုံမှုန့်၊ သကြား၊ ဆား၊ မုန့်ဖုတ်ထားသောအမှုန့်များကိုပန်းကန်လုံးထဲသို့ထည့်။ အတူတကွရောထွေးပါ။ ထို့နောက်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအထိအတူတကွအရာအားလုံးကိုနှိုးဆော်ပါ။ ထောပတ်ကိုရေထဲအရည်ကျိုပါ။ နွေးဖို့ထောပတ်ထည့်ပြီးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းသည်အထိနှိုးဆော်။ ခဏဖယ်ထားပါ•အလယ်အလတ်အပူဖြင့်ဒယ်အိုးကိုပြားထားပါ။ ဒယ်အိုးအပူမစတင်မှီအထိ•ဒယ်အိုးပူလာသောအခါ ထောပတ်အနည်းငယ်ထည့်ပါ။
5. • pancakes လုပ်ခြင်း၏အလှအပအတွက်ပြားချပ်ချပ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက်ထောပတ်အရည်ပျော်သွားသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းပါ။ • pancake အရောအနှောကိုဒယ်အိုးပေါ်တွင်လောင်းပါ။ လူကြိုက်များပုံသဏ္roundာန်ပတ်ပတ်လည်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြိုက်သည့်အရွယ်အစားကိုတိုင်းပါ (သို့) ပိုင့်ရှိသောမည်သူမဆိုဒယ်အိုးကိုထည့်ပြီးပန်ကိတ် Battery ထည့်နိုင်သည်။ • pancakes ကိုလှန်လိုက်ပါ။ pancakes သည်အညိုရောင်၊ အဝါရောင်မဖြစ်မှီတိုင်အောင်လှပသည်။ •ချိုမြိန်သောအချဉ်သီးသောအသီးများနှင့်ဘေးချင်းယှဉ်။ ထားပါ၊ မုန့်ပြားပေါင်းထည့်၊ မုန့်ဖြန်းဖြန်းဖြန်းဖြန်းပျားရည်သွန်းလောင်းပါ။
6. အေးမြသောရာသီဥတုတွင်အရသာရှိပြီးအရသာရှိသော pancakes များကိုသာသောက်ပါ၊ လက်ဖက်၊ ကော်ဖီသို့မဟုတ်ကိုကိုးပူနှင့်အတူငုပ်ပါ။ ရိုးရှင်းသောဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်ကူညီသည် နွေးနှင့်လှပဖြစ် ကလေးများနှစ်သက်သလို smear နိုင်သည့်မီနူးတစ်ခု အဖြစ်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအနုပညာတူပြားအလှဆင်အဖြစ် အေးပါတယ် သင့်မိသားစုအတွက်ပျော်ရွှင်မှုကိုဖန်တီးရန် pancakes ပြုလုပ်ရန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်နွေးထွေးမှုကိုပေါင်းထည့်ကြပါစို့။